Ahoana ny fanovana ny rindrina amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny andiany tsirairay amin'ny iOS 8 dia mazàna mitondra antsika sary an-tsary vaovao sy mahaliana Azontsika atao ny mampiasa azy io mba hananantsika manokana ny fitaovantsika mifanaraka amin'ny zavatra tiantsika. Azontsika atao ny misafidy sary natiora na zavatra, sary misy loko sy endrika geometrika ary koa sary mavitrika. Ireo sary mavitrika ireo dia hanampy fihetsiketsehana amin'ny sary an-tsoratry ny iPad tsy tapaka, izay hidika ho fitomboan'ny fihinanana bateria. Azontsika atao koa ny mampiasa sary izay efa notehirizinay tao amin'ny iPad (horonan-tsary, rakikira, sary ao anaty streaming), izay ahafahantsika mampiasa ny sary na sary izay tena tianay indrindra jerena amin'ny efijery hidin-tsika na amin'ny ambadiky ny solaitrabe.
Hanova ny sary an-tsaina iPad
Miakatra aloha isika Fikirana > Wallpaper
Sary roa no haseho eto ambany izay mifanaraka amin'ny sary any ambadika izay napetrantsika teo amin'ny efijery hidin-trano sy ny sary izay napetrakay teo amin'ny efijery / fantsona.
Raha hanova ny sary aseho dia kitiho Misafidiana vola hafa.
Ao amin'ny efijery manaraka dia tsy maintsy mifantina ny karazan-tsary izay tiantsika hapetraka ho lasa ambadika: sary raikitra, mavitrika (miaraka amina fivezivezena) na sary iray avy amin'ny roulinay.
Raha vantany vao nifantina ny karazana sary izay tianay apetraka ho toy ny sary any ambadika isika dia kitiho eo izy safidio izay toerana hametrahantsika azy, eo ambanin'ny solaitrabe na eo amin'ny efijery mihidy.
Eo ambanin'ny efijery dia hahita ireto safidy manaraka ireto isika:
Efijery mihidy, hametahana ny sary eo amin'ny efijery block an'ny iPad.
Fandraisana efijery, izay hahafahantsika mametraka ny sary eo amin'ny efijery / fantsom-bokin'ny fitaovana misy antsika.
SamyAmin'ny fipihana ity safidy ity dia hapetraka amin'ny takelaka roa ny sary.
Farany hitantsika ny safidy lalina, izay ampandehanana amin'ny toerana misy anao, ity safidy ity dia hampihetsika ny sary ambadika rehefa mamindra ilay fitaovana isika.
Afaka manao izany koa isika apetaho mivantana avy eo amin'ilay roul ny sary ny fitaovantsika. Mba hanaovana izany, mila mandeha fotsiny amin'ny sary resahina isika, tsindrio ny bokotra fizarana ary mifidiana Wallpaper, mba hiseho ny menio teo aloha, izay hisafidianantsika izay toerana tiantsika haseho ny sary, amin'ny efijery hidin-trano na amin'ny ny efijery Of start.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fanovana ny rindrambaiko iPad
Fetsy hanatsarana ny fanjifana bateria amin'ny Apple Watch